Nzira yekuwana nekusimudzira Oppressor MK2 muGTA Online? | la-manette.com
Nzira yekuwana nekusimudzira Oppressor MK2 muGTA Online?
30 octobre 2021 ndima Mathilde Grimard
Iyo Oppressor Mk II ndiyo imwe yeakanakisa mota muGTA Online ine akawanda ekusimudzira uye maitiro.
Iyo Pegassi Mudzvanyiriri MK II itsika hoverbike muGrand Theft Auto Online. Iyo motokari yakabudiswa muAfter Hours update musi waJuly 14, 2018. The Oppressor MK II ishanduro yakagadziridzwa yeAppressor isina mavhiri, ine simba rekubhururuka nemapapiro paunenge uchibhururuka.
Iyo Oppressor Mk II ndeimwe yemotokari inotonhorera muGTA Online.
Pasina kupokana ndiyo imwe yemotokari dzinotonhorera muGTA Online, ine kumhanya kwepamusoro kusvika ku135 mph, zvombo zvinouraya zvakawanda, uye akasiyana siyana. Imwe yemibvunzo mikuru yevazhinji yevatambi ndeye nzira yekuvandudza iyo MK2 Mudzvanyiriri muGTA Online? Muchinyorwa chino, isu tinokuratidza nzira yekuwana nekusimudzira iyo Oppressor MK2 pamwe nemutengo wekuvhiya uku.
Nzira yekuwana sei Mudzvanyiriri MK2 muGTA Online?
Unogona kutenga Mudzvanyiriri MK2 muGTA Pamhepo nemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemashanu kubva kuWarstock Cache uye Carry chitoro pafoni yako. Haufanire kuitenga, asi mutengo watove wakakwira zvekupenga. Kunyange zvakadaro, kutenga kwakakosha, tichifunga nezvekunakidza uye kunakidza kwazvinoita.
Nzira yekuwana sei Oppressor MK 2 zvakachipa?
Unogona kuwana Oppressor MK2 muGTA Online nemutengo wakaderera wemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana ukakwanisa kuvhura "Mutengo Wekutengesa". Kunyange mutengo iwoyo uchiri wakakwira, kudzikiswa kwemadhora zviuru zana kunofanirwa kutariswa.
Unogona kutenga iyo Oppressor MK2 zvakachipa kana ukatenga iyo Terrobyte kutanga.
Kuti ukwanise kuderedzwa, unofanirwa kutenga Terrobyte uye kupedzisa mamishini mashanu evatengi muNerve Center. Unogona kutenga Terrobyte kubva kuWarstock Cache uye Carry chitoro pakati pemadhora 1 uye $ 375. Nekudaro, sezvo Terrobyte yakakurisa kune yakajairika garaji, unofanirwa kutanga uine Night Club usati watenga Terrobyte.
Zviri nani kutenga Terrobyte usati wawana Oppressor MK2.
Mushure meizvozvo, iwe unozogona kuwana iyo Oppressor MK2 nemutengo wakachipa. Pamusoro pezvo, unoda Terrobyte kugadzirisa uye kukwidziridza Oppressor MK2 yako, saka zviri nani kutanga watenga Terrobyte.
Verenga zvakare: Maitiro ekugadzirisa grey kunze kweWi-Fi pa iPhone?
Maitiro ekuvandudza iyo Oppressor MK2 muGTA Online?
Muchikamu chino, tiri kuzokuratidza maitiro ekuvandudza Oppressor MK2 muGTA Online. Izvi zvinosanganisira kusimudzira nhumbi dzokurwa nadzo, nhanho, injini, moto, chivharo, kurasikirwa nekudzivirira kubiwa, pendi yekugadzirisa, uye chombo. Tevedza matanho ari pazasi kuti ukwidzire Oppressor MK2 yako muGTA Online:
Shevedzai Mudzvanyiriri MK2 neMudhudhudhu Club menyu semutungamiri.
Unogona kusheedza Mudzvanyiriri MK 2 kuburikidza neMudhudhudhu Club menyu.
Shevedza iyo Terrorbyte uchishandisa Interaction => Services menyu. Iyo Terrorbyte ichaonekwa munzvimbo iri padyo iwe yaunogona kuona pamepu.
Shandisa yako Oppressor MK2 kubhururuka kuenda kunzvimbo yeTerrorbyte. Swedera kumashure kweTerobyte uye wodzvanya E.
Iwe unogona kuona nzvimbo yeTerobyte pamepu.
Iwe zvino wave mukati meTerobyte neOppressor MK2 yako.
Yako Terrobyte inoda iyo "Specialized Workshop" kusimudzira kugadzirisa iyo MK2 Mudzvanyiriri. Kana iwe usina "Specialty Workshop" yekusimudzira, enda kuWarstock Cache uye Carry chitoro pafoni yako kuti uitenge nemadhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu.
Zvino gara paOppressor MK2 wodzvanya E kuti uwane iyo Specialist Workshop menyu. Famba menyu uye sarudza kusimudzira kune yako Oppressor MK2.
>>> Verenga zvakare: Maitiro ekunyoresa sei CEO muGTA 5 Online?
Unogona kukwidziridza Oppressor MK2 muTerrobyte.
Heano mitengo yezvese kukwidziridzwa kweOppressor MK2.
Kuvandudza zvombo 20%
Kuvandudza zvombo 40%
Kuvandudza zvombo 60%
Kuvandudza zvombo 80%
Yakavandudzwa zvombo kusvika ku100%
EMS kusimudzira, nhanho 1
EMS kusimudzira, nhanho 2
EMS kusimudzira, nhanho 3
EMS kusimudzira, nhanho 4
Contour mune 3 mavara
Mazuvano 5 Colors
Series pfuti muchina
Verenga zvakare: Maitiro eKuvharisa Runhare: Yakanakisa Runhare Cloning Mapurogiramu eKutamisa Yese Dhata Yako
Mutengo wekusimudzira zvizere Oppressor MK2 muGTA Online
Pano tichaverenga mutengo wakazara kuitira kuti iwe uwane yako yakakwidziridzwa zvizere Oppressor MK2. Mutengo wekutora Mudzvanyiriri MK2:
Nightclub: kubva kumadhora 1.
Mutengo weTerrorbyte unotangira pamadhora 1,375,000.
Mutengo wepakutanga weMudzvanyiriri MK2: $ 3,890,250.
Oppressor MK2 mutengo wekutengesa: $ 2,925,000.
Zvinotora huwandu hwemadhora zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nemashanu kuti uwane Mudzvanyiriri MK5 kana ukatanga kutenga Terrorbyte. Mutengo wekukwidziridzwa kwakazara kweOppressor MK435:
Countermeasures: $ 110,000
Injini yekugadzirisa: 25
Zvombo: Zvombo zvekuvhima: $ 180 / MG inoputika: $ 000.
Zvinotora $345 kusvika $000 kusimudzira zvachose Oppressor MK440 pasina kunze.
>>> Verenga zvimwe: GTA 4 cheats: zvombo, zvombo, hutano uye nezvimwe
Mathilde ndiye mupepeti anonyanya hunyanzvi mune zvese zvine chekuita neGaming nhau pa la-manette.com iri muNewfoundland, Canada, inofukidza dzakasiyana siyana dzemitambo uye esports. Mathilde akaisa masiginecha munzvimbo dzinoverengeka dzakadai seG FUEL, NME, Gfinity uye anodada kutungamira kuvharwa kwemutambo wemutongi. Unogona kubata Mathilde pa [email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naMathilde Grimard (ona zvese)
Zvivi Zvinomwe Zvinouraya: Grand Muchinjikwa iri kubatana neakakurumbira anime Re: ZERO for a crossover event. - Ndira 15, 2022
Splatoon 2: matipi uye matipi - maitiro ekutamba online neshamwari - Ndira 15, 2022
Minecraft Pocket Edition - Iyo Yekupedzisira Redstone Gwaro (Zvishandiso) - Ndira 15, 2022
Verenga zvakare: Maitiro ekudzosa iyo Google yekutsvaga bar ku Android skrini?
GTA 5 Cheats Helicopter: Heano ese GTA 5 cheats macode eiyo helikopta paPC, Xbox uye PlayStation.
Iyo yakanakisa mitambo yePokémon mafeni 2021